Tenga Cyproterone acetate powder (427-51-0) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Zvepabonde Kuwedzera Mahomoni / Cyproterone Acetate upfu
Rating: SKU: 427-51-0. Categories: Kushandiswa Kwevarume, Zvepabonde Kuwedzera Mahomoni
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva ku gram kusvika mukuraira kweCyproterone acetate powder (427-51-0), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Cyproterone acetate upfu mushonga wehormone uye inozivikanwa zvakare nezita rayo zita rekuti Cyprostat, Androcur, Andro-Diane, Cyprone, Dianette Icho rudzi rwemushonga unonzi anti androgen.
Molecular Kurema: 416.94
Cyproterone acetate powder mukugadzira muviri
Kemikari Mazita: Cyprostat, Androcur, Andro-Diane, Cyprone, Dianette
Mazita emagetsi: Cyproterone acetate powder, Diane-35 powder, 427-51-0
Cyproterone acetate powder inowanikwa semuromo (nemuromo) piritsi uye sehutachiita hutachiona. Nhamba yakakurudzirwa yeCyproterone acetate piritsiti ndeye 200 mg kune 300 mg (4 kusvika kuPiritsi 6) zuva nezuva, yakakamurwa kuva 2 kusvika ku3 doses uye inotorwa mushure mekudya.
Kune varume vane orchiectomy (kubviswa kwemapete), chirwere chakaderera che 100 mg kusvika 200 mg zuva nezuva pamakamuri akaparadzaniswa zvinokurudzirwa. Nhamba yakakurudzirwa yehuwandu hwemaitiro eCyproterone acetate raw powder (Androcur® Depot) inonzi 300 mg inopindwa mumuviri kamwe kamwe pavhiki.
Zvinhu zvakawanda zvinogona kukanganisa kuwandisa kwemishonga inoshandiswa nomunhu, zvakadai sekurema kwemuviri, zvimwe zvehutano, nemimwe mishonga. Kana chiremba wako akakurudzira mukana wakasiyana kubva kune wakanyorwa apa, usashandise nzira yauri kushandisa nayo mishonga pasina kubvunza chiremba wako.
Cyproterone acetate powder inogona kukonzera utera uye kuneta apo iwe unotanga kuitora. Mushure mekunge mwedzi wechitatu, muviri wako unozojaira mishonga uye izvi zvinofanira kuderedzwa.
Zvakakosha kutora mishonga iyi sezvakataurwa nechiremba wako. Kana iwe uchinge warasikirwa newaini, tora iko nokukurumidza sezvaunogona. Kana iri nguva yenguva yako inotevera, rambai murosi wakarasika uye rambai neine regularly dosing schedule. Usatora muviri wepamusoro kuti uite nokuda kwekusafa. Kana iwe usina chokwadi chekuita iwe mushure mekushaya chiitiko, taura nachiremba wako kana wemhizha kuti uwane mazano.
Doro inodhaka inofanira kuve yakaderera apo inotora Cyproterone acetate yakasvibira poda nokuti inogona kuderedza kushanda kwemishonga.
Chengetedza mishonga pakushambidza kwemukati, edzivirire kubva kuchiedza uye unyoro, uye uchengetedze kunze kwekusvika kwevana.
Usaisa mishonga mumvura yakasviba (sezasi pasi pakadzika kana muimba yega) kana mudzimba dzemarara. Kumbira mushonga wemishonga yako kuti ungasara sei mishonga isingachadiwi kana yapera.
Usatora mishonga iyi kana iwe:
-iyo inokonzera kana inononoka kuCyproterone acetate powder kana chero zvinganganisa zvemishonga iyi
-kuve nechirwere chinokonzera chiropa kana kuderedza chiropa chinoshanda
-ave yakagadzirisa mafungiro
Usati watanga kushandisa Cyproterone acetate powder, iva nechokwadi chekuudza chiremba wako nezvehupi hupi hwehutano kana hutachiona hwaunogona kuva nawo, chero mishonga yaunenge uchitora, kana iwe uri pamuviri kana kuti kuyamwisa, uye chero zvimwe zvakakosha nezvehutano hwako. Izvi zvinogona kuchinja maitiro aunofanira kushandisa mushonga uyu.
-Arihol: Kubudirira kweCyproterone acetate poda yakasvibiswa inogona kuderedzwa kana iwe ukadya doro. Iwe unofanirwa kuderedza uwandu hwehudha iwe unonwa kana uchitora mishonga iyi.
-Kudzvinyirira: Cyproterone acetate poda kushandiswa kwave kunosanganisirwa nezviitiko zvakawedzera zvekushungurudzika kwemamiriro ekuchinja, kunyanya nekutanga kwerapi. Iwe unofanirwa kuzivisa chiremba wako kana iwe wakambove nekuora mwoyo kare.
-Dhiabetes: Cyproterone acetate poda yakasvibiswa inogona kukonzera kuti ropa rekuisa ropa riwedzere kana uri nechirwere cheshuga.
-Ichirwere chinotapukira: Cyproterone acetate powder inogona kuita kuti mvura iwane muviri. Kana uine chirwere chemwoyo, chenjerera kana uchishandisa mishonga iyi nokuti mwoyo wako unogona kushanda zvakaoma.
-Hurwere Hwakasimba: Cyproterone acetate poda yakasvibiswa inogona kukanganisa chiropa. Inowanzotanga pashure pemwedzi yakawanda yekurapa. Chiremba wako achacherechedza chiropa chako chinoshanda neropa rekuongorora kana pane zviratidzo kana zviratidzo zvekuropa kwechiropa.
-Pregnancy: Cyproterone acetate powder haisi yekushandiswa nevakadzi.
-Kudya kwakanyanya-kudya: Cyproterone acetate poda yakasakara haisi yekushandiswa nevakadzi.
-Chizvarwa: Cyproterone acetate powder hakurudzirwi kuti ishandiswe muvana
Cyproterone acetate powder, The acetate salt ye-synthetic steroidal antiandrogen ine simba reprogestational uye antiineoplastic. Cyproterone acetate yakasviba yakasunga iyo androgen receptor (AR), nokudaro ichidzivirira androgen-induced receptor activation muzvigadziro zvinokonzera uye kudzivisa kukura kwe testosterone-sensitive tumor cells. Uyu mushandi anoitawo progesational agonist yemugove wepamusoro wepituitary inoderedza luteinizing hormone (LH), zvichiita kuti kuderedzwa kwe testicular androgen secretion uye serum testosterone mazinga. Kurapa neCyproterone acetate powder ndoga kunokonzera kusagadziriswa kudzvinyirira kwemaitiro e testosterone. Chengetera kwekushanda kwekliniki inoshandisa uchishandiswa ichi.
Iyo yakakemikari yakagadziriswa yeCyproterone acetate yakasviba poda acetae ndeyi:
Cyproterone acetate poda yakashambadzira Marketing
Nzira yekutenga Cyproterone acetate powder kubva kuAASraw